Iibhokisi ezinkulu zeOfisi yeOfisi ka-2018: Ukusuka 'kwiSolo' ukuya 'kwiRobin Hood' - Iimuvi
Eyona Iimuvi Iibhokisi ezinkulu zeOfisi yeOfisi ka-2018
Iibhokisi ezinkulu zeOfisi yeOfisi ka-2018
URobin Hood ngaphezulu kokungaphumeleli ukubetha ithagethi yayo kwiofisi yebhokisi.Larry Horricks / Lionsgate / Ingqungquthela
Siyaxolisa kwangaphambili ngokutyumza nawaphina amaphupha omthandi omncinci, kodwa eyona nto inkulu kushishino lweefilimu eyikhathaleleyo yimali-ngubani onayo, ngubani olahlekileyo kunye nendlela engcono yokwenza.
Ukuthetha jikelele, Izitudiyo zithanda ukuphindaphinda kathathu uhlahlo-lwabiwo mali lwemveliso yeetente kunye nomvuzo kwiofisi yebhokisi. Ke, umzekelo, ukuba Marvel blockbuster elandelayo Ixabisa i-200 yezigidi zeedola ukuvelisa I-Marvel Studios inethemba lokufumana ubuncinci i-600 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela, ngakumbi ngaphezulu. Xa usongeza kwiindleko zentengiso-ezingafakwanga kubhajethi yoluntu- kwezinye zezi bhanyabhanya ziphambili, ixabiso lokugqibela lenyuka kakhulu ( I-Justice League echithiwe $ 150 yezigidi kukhuthazo kuphela). Ufumana umbono.
Rhuma kwiNcwadana yeendaba yoMbonisi
Inyaniso ebukhali yeshishini kukuba iimovie azilotyalo-mali olukhuselekileyo kwezi ntsuku, olunika impumelelo enkulu enkulu kunye nayo yonke ilahleko etyumkileyo eyongeziweyo ngokubaluleka. Sithathe nokujonga Iifilimu ze-10 eziphezulu ze-2018 eziphezulu (ezinye zazo zinokumangalisa), kodwa kuqala, nazi iibhokisi ezinkulu zeofisi zonyaka.
ukungafun Ngendlela onokucinga ngayo, uphose uphawu ngendlela enkulu, ulahlekelwe ngamashumi ezigidi zeedola kwinkqubo.
Ubuncinci uya kufumana i Ukutyunjwa kuka-Oscar kulo nyaka ukukhusela ukubethwa.
Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo ($ 2 yezigidigidi), istudiyo sinokwenza kakhulu nantoni na esiyifunayo kwaye siphume siphezulu kwezemali ngo-2018.
Isifundo apha: Ayizizo zonke iipropathi ezaziwayo ezinokusetyenziselwa ii-blockbusters, ngakumbi ezibekwe zijikeleze iholide yeKrisimesi. Ekhaya ndodwa Ixabisa yonke i-18 yezigidi zeedola ukwenza, ke yiza ne-notch ezimbalwa, iDisney.
kuqikelelwa ukuba iDisney ilahlekile phakathi kwe- $ 86 yezigidi kunye ne- $ 186 yezigidi kwi Umbimbi wexesha , ezinokubiza ngaphezulu $ 150 yezigidi xa uthatha inxaxheba kwintengiso.
Oko kwathethi, ungathini ukuba iplanethi ingamhloniphi u-Oprah ngolu hlobo.
ezona zenzo ziphantsi Idabi leenkwenkwezi ifilimu kwimbali. Ukuthi ga. Ifilimu ilahlekelwe yiDisney ngaphezulu kwe $ 50 yezigidi , ebonakala ngathi luqikelelo oluqinisekileyo, kwaye yamisa wonke umsebenzi kwiscreen esikhulu Idabi leenkwenkwezi i-anthology i-movie ephumayo (njengombono wethu owuthandayo, UKenobi, yayiphuma emhlabeni, ngelishwa).
Uxolo, Ifayile yeLucasfilm , kodwa yile nto uyifumanayo xa ucima abenzi beefilimu abathandekayo uPhil Lord noChris Miller kushiyeke iiveki nje ezintandathu zemveliso.
IGI UJoe: Ukuziphindezela , apho wadlala khona indawo encinci, kwaye khange abe kwi Kulungile Umboniso bhanyabhanya ukusukela ngo-2012 ILooper . Kodwa, ewe, ngokuqinisekileyo, masimfake kwenye Inzima yiyo loo nto enye inxalenye yokulandelelana, enye inxalenye yangaphambi kokuqala . Iyavakala loo nto.
Umembi wamangcwaba ilungelo lokushishina-kodwa ilinge lalo lalibububi.
Ngelixa umboniso bhanyabhanya wawudlala kakuhle phesheya kolwandle (i-216 yezigidi zeedola), awuzange uphumelele apha ekhaya (i-57 yezigidi). Ukujonga ii-studio ngokubanzi ukwahlula ukuthengisa amatikiti kunye nababonisi basekhaya abangama-50/50, ngelixa befumana nje iipesenti ezingama-35 phesheya kolwandle, Umembi wamangcwaba ayiphumelelanga ukwenza isithembiso sayo.
Idabi leenkwenkwezi Umdlali weqonga wayenethemba levumba elimnandi lempumelelo nenye i-franchise-kwityala lakhe lokuqala lokuvelisa akukho ngaphantsi-kodwa waphela sele enukayo. Imvukelo yenziwe ikakhulu ngenxa yokuba uGuillermo del Toro ka-2013 yoqobo wakhwela kwi-411 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela nge-112 yezigidi ezisempilweni e-China. Kodwa ubuncinci ifilimu iwele i-100 yezigidi zeedola ekhaya ngokunjalo. Imvukelo Ukungasebenzi kakuhle ngaphandle kwesango kulandela igama elibi lomlomo, ngokuvulwa kwezigidi ezingama-28 zeedola kwindlela engaphantsi kweedola ezingama-60 ezigidi. Ngelixa kusaqhubeka ukuthatha isiqwenga sotshintsho kwinto ebaluleke ngakumbi UBukumkani boMbindi ($ 99.5 yezigidi), kwakungonelanga ukujika Imvukelo ukubetha. Abaphulaphuli bafuna itad engaphezulu kwe nje iirobhothi ezinkulu ezilwa nezilo ezinkulu kangangeyure ezimbini.
Umdlali ophumelele kakhulu kwimbali Kwaye enye yeefilimu zebhokisi yeefilimu zokugqibela ezicocekileyo eHollywood inayo. Kodwa ekhaya, Isikwere yehla nge-68 yezigidi zeedola. Kunzima ukuhambisa ikota yesine Inzima Ukuhlonela kwixesha le-movie eliqhelekileyo elikhethekileyo le-blockbuster. Kodwa iliwa lizakulunga-unezinto ezimbalwa ezibabiza kakhulu ezihlawula kakhulu (eziya kuthi ngethemba ziguqulele kwiibhotile ze-tequila ezininzi zakho).
USenator Booker uyaqhubeka nokubonisa ubuNkokeli obukhethekileyo
Ijezi-Entsha Yezopolitiko 2022
Abasetyhini Ukwabelana ngeVidiyo ngokuFunda ileta kaCoretta Scott King yokuxhasa u-Elizabeth Warren
Yonke into ekufuneka uyazi malunga neSan Diego Comic Con 2018
Laa mfo kwiFlashdance
Iindawo eziPhambili zokuThenga iRandi yokuzibandakanya kweDayimani: kwiiVenkile eziGqwesileyo eziphezulu ze-Intanethi zika-2021
Ezona Vibrator zaBasetyhini ziBalaseleyo: Iindidi ezi-6 eziFunekayo zokuQaphela kunye ne-25 eziKhethiweyo eziPhezulu
Dibana noShawn Cotter, iNdoda emva kweRickroll
UAnn Coulter Ulusizi Ukuba akasaphinde amenyelwe kumaqela esidlo
IPavane yeNkosazana: Akukho tyhefu kaMarilyn, Iphupha likaShakespearean
UBernie Sanders wagcina isithembiso esenziwe ngokufihlakeleyo kusapho lukaSandra Bland
I-NH Poll: UChristie kwindawo yesiThandathu njengeRubio Leapfrogs ngaphezulu kweCroz
Imbali emide yeShishini loMculo lokwahlula abaNtsundu namaJuda
Wenner vs Wenner: UJane ufumana iNdlu yaseKapa njengoJann uthengisa iStake nge $ 4 M.
U-katie uthi ibhayisikobho epheleleyo
ngu blake shelton basathandana gwen stefani
Iihotele eziphambili onokuhlala kuzo ngexesha le-mardi gras
iincwadi ezintle ezenza ukuba ucinge
ubukele ntoni kwi-Netflix kule mpelaveki
liphuma nini ixesha elitsha lokukhanya